အပင်ကြွေသည် အသိုက်အတွက် အသုံးများဆုံး ဆောက်လုပ်ရေးကုန်ကြမ်းပင်တည်း။ အခြား အတွေ့ရများသော ကုန်ကြမ်းမှာ သားမွေး သို့မဟုတ် ငှက်မွေးများ၊ အခြားမှ မဟုတ်လျှင် မိမိကိုယ်ပေါ်မှ သော်လည်းကောင်း၊ ရွှံ့၊ ဖုန်မှုန့်၊ မစင်နှင့် တိရိစ္ဆာန်ကိုယ်မှ ရသော အထူး စွန့်ပစ်ပစ္စည်းများသော်လည်းကောင်း ပါဝင်သည်။
ပျား၊ ပိတုန်းတို့သည် ပျားအုံဟု ခေါ်ရမည့် သူတို့အသိုက်ကို တည်ဆောက်ရန် သဘာဝအလျောက် အခေါင်းပေါက်များကို မကြာခဏ ရှာဖွေကာ၊ အစာများ သိုလှောင်ပြီး၊ ရင်သွေးငယ်များကို ပြုစုပျိုးထောင်သည်။ အခြား ပျားမျိုးစိတ်နှင့် အချို့ နကျယ်ကောင်များသည် မြေကြီးထဲ တွင်းတူးလျှင် တူး၊ မဟုတ်က သစ်သားများကို ကိုက်ဝါးပစ်ပြီး အသိုက်ဆောက်တတ်သည်။  ဥပမာအားဖြင့်၊ Megachile rotundata မျိုးစိတ်တွင်၊ ပိုးမသည် မြေကြီးထဲတွင် အပေါက်သေးသေးများ ဖောက်သကဲ့သို့ သစ်ဆွေးများတွင် ပြွန်ပုံစံ အသိုက်များ ဆောက်သည်။ အခန်းတခုစီကို ပျားမေးရိုးဖြင့် သစ်ပင်အရွက်များကို ကိုက်ဖြတ်ပြီး၊ ဒစ်ပြားဝိုင်းသဏ္ဌာန် ဖွဲ့စည်းသည်။  ပျားအုံများကို သူတို့ ခန္ဓာကိုယ်မှ စစ်ထုတ်လိုက်သော ပျားဖယောင်းများပေါ် ထူထောင်ထားသည်။ နကျယ်အုံများကိုမူ သစ်ပင်မှ ရေကို သူတို့တံတွေးဖြင့် စက္ကူပျော့ဖတ်အဖြစ် ပြောင်းလဲကာ တည်ဆောက်နိုင်သော စွမ်းရည်ပေါ် မှီတည်နေပေသည်။  သိုက်အုံကို မကြာခဏ ဥနှင့် အစာများကို သိုလှောင်ရန် အုံ၏ သီးခြားအစိတ်အပိုင်းများနှင့် ခွဲခြားထားတတ်သည်။
Tom Deméré (Spring 2002)။ Nests and Nest-building Animals (pdf)။ San Diego Natural History Museum။ August 19, 2013 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
"nest"။ Encyclopædia Britannica။ September 30, 2013 တွင် မူရင်းမှ မော်ကွန်းတင်ပြီး ။ August 19, 2013 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
Most populous bird's nest။ Guinness World Records။ August 21, 2014 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ August 20, 2013 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
Largest bird's nest။ Guinness World Records။ August 20, 2013 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
Mammal Nests and Burrows။ Kids' Inquiry of Diverse Species။ University of Michigan။ December 3, 2013 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ August 20, 2013 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
Largest mammal to buildanest။ Guinness World Records။ August 20, 2013 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
Milius, Susan (2007-01-06). "Most bees live alone: No hives, no honey, but maybe help for crops" (in en). Science News 171 (1): 11–13. doi:10.1002/scin.2007.5591710110. ISSN 1943-0930.